Imimiselo yokudlala yemidlalo, ukulinganisa, iiFomathi kunye neMigomo
Imigaqo, amaFomathi, iSicwangciso kunye neSigama soMdlalo weMidlalo
Ukudlala umdlalo ngenye yeendlela eziphambili zokhuphiswano kwigalufa. Iqhuba abadlali omnye ngomnye, kunokuba yinye inxamnye nentsimi njengemidlalo yokubetha . Abaphikisanayo bancintisana ukuphumelela izimbobo zomntu, kwaye umdlali ozuza iindimbo ezininzi unqoba umdlalo.
Umdlalo umdlalo unokudlalwa ngabantu ababini, omnye ngomnye, kwaye owaziwa ngokuba yi-Singles Match Play. Okanye amaqela abadlali ababini angakraba , kunye ne- Foursomes ne- Fourball ifomathi eziqhelekileyo zokudlala umdlalo.
Ukuze ufunde kabanzi malunga nomdlalo wokudlala, hlola izihloko ezingezantsi:
Ukugcina i-Score kuMdlalo weMidlalo
1-up, 2-down, 3-and-2, 5-and-3 ... dormie, i-half, yonke i square ... oko kuthetha ntoni? Eli nqaku lichaza indlela amanqaku agcinwe ngayo kumdlalo wokufanisa, kwaye zithini na ezo zibalo.
Iifom zokudlala zomdlalo
Amafomathi omdlalo oqhelekileyo omdlalo adlalayo, ama-foursomes, kunye namabhola amane. La manqaku achaza iindlela ezisetyenziswayo .
Imithetho eyahlukileyo kwiMidlalo yokuThathela
Imithetho yokudlala umdlalo kunye nokudlala kwesigulo kuyahluke ngeendlela eziphambili, eyona ndlela iyona ndlela ihamba ngayo le ndlela ezimbini zegalufa zidlalwa. Eli nqaku lihlola ezinye zeentlukwano , ezinkulu kunye nezincinci, kwimimiselo yokudlala umdlalo kunye nokudlala kwesisu.
Abaninzi begalufu banomdla wokudlala umdlalo wezicwangciso zayo ezahlukeneyo. Abadlali begalofu baninzi ukucinga xa bedlala umdlalo, kwaye eli nqaku liya kwiindlela ezihlukeneyo kunye namaqhinga asebenzayo.
Imigomo yokuThola iMidlalo
I- glossary yethu yemigangatho yegalufu ibandakanya iinkcazo ezimbalwa abaqalayo abangazifuna ukuze baqonde umdlalo womdlalo.
Cofa kwixesha ukufumana ingcaciso yalo:
• Yonke i Square
• I- Putt
• Iimfuno ezine
Yintoni 'iLooper' eGoli?
I-Olimpiki yeBhola yeBhola ngeNBA
Yintoni i-Tsukahara Vault?
Isikhokelo soMqala kwiNkcazo yomthi weHlabathi
Iingoma zeBeatles: 'Ndithande Nenze'
Iphoyinti lokuNgcinisa kotywala